Chikudo bodo muzvikoro! | Kwayedza
Chikudo bodo muzvikoro!
20 Jul, 2018 - 00:07	 2018-07-19T08:48:21+00:00 2018-07-20T00:00:24+00:00 0 Views
SVONDO rino tine nyaya inosuwisa zvikuru yemwana wechikoro wemakore 10 okuberekwa wekuMuzarabani, uyo anonzi akarohwa akafa nevamwe vake apo vaibva kuchikoro.
Nyaya iyi inorwadza zvikuru pakuti mwana uyu akasvika kurasikirwa neupenyu hwake nekuda kwezvinhu zvinokwanisa kudzivirirwa.
Mukubuda kwenyaya iyi, zvinonzi mwana uyo akarohwa nevamwe vake vanokwana vana kusvikira afa apo vana ava vaibva kuchikoro uko vainge vadzingirwa mari yemafizi.
Tikatarisa zera revana vanonzi vakarova mwana uyu kusvikira afa tinoona kuti vadiki zvikuru sezvo zvichinzi mukuru wavo ari kuita Grade 7.
Zvinonzi pakazorwisana vana ava, vainge vadzingwa kuchikoro vachinzi vaive vasina kubhadharirwa mari dzechikoro.
Pasi pemutemo weZimbabwe, vakuru vezvikoro havatenderwe kudzinga vana vanenge vasina kubhadharirwa mari dzefizi asi kuti vanofanira kugara pasi nevabereki vavo, voronga kuti mari iyi ingabviswe padiki padiki sei.
Saka zvichida dai vana ava vasina kudzingwa kuchikoro, pamwe tsaona iyi ingadai isina kuitika. Kuchitiwo, kufa kwemwana uyu kunoshamisa kana kuchitariswa zera revamwe vake vanonzi vakamurova kusvikira afa.
Nyaya iyi zvakare inoburitsa pachena kushungurudzwa kunoitwa vana muzvikoro nevamwe vavo.
Kune vana vanotozeza kuenda kuchikoro nekuda kwekuti vanenge vachitya kunoshungurudzwa nevamwe vana kana kuti nevarairidzi.
Kuita kwakadai kunokanganisa zvikuru budiriro yevanenge vachishungurudzwa nekuti havadzidze vakasununguka.
Vamwe vana kana vange vachigona vanopedzisira vave madofo nekuda kwekumbunyikidzwa uku. Akawanda matambudziko anosangana nevana vanenge vachishungurudzwa nevamwe vavo muzvikoro.
Vamwe vacho vanopedzisira vave kuda kugara voga vakasuruvara uye vasingatambe nevezera ravo.
Kune zvimwe zvikoro zvakaita semabhodhingi kune katsika kekuita vamwe vana manyunyu, kunyanya avo vachangotanga semaFomu 1.
Vamwe vana vanoitwa manyunyu kuburikidza nenzira dzinosanganisira kurohwa kana varamba kuita zvavanenge vanzi vaite nevamwe vana vanenge vari vakuru kwavari. Vamwe ndivo vanotorerwa zvekudya zvavo kana kuwachiswa nhumbi.
Iyi itsika yakaipa zvikuru nekuti uyo anenge arohwa hunyunyu anenge achida kuzotsivavo panozouya vamwe vanenge vari vadiki kwaari.
Saka katsika aka kanoramba kachitenderera nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akasimba ekukapedza. Varairidzi vane basa guru rekurovedzera hunhu hwakanaka muvana vechikoro kuti vasiyane netsika yekutamba chikudo kana kurwisana vangave vari pachikoro kana munzira apo vanenge vave kuenda kudzimba.
Vaberekiwo zvakare vanofanira kubatsirana nevarairidzi mukudzidzisa vana hunhu hunoyemurika. Zvinorwadza zvikuru kunzwa nyaya seyekuMuzarabani yemwana wekufa mushure mekunge arohwa nevamwe vake.
Uhu upenyu hwakarasika zvisina tsarukano. Rufu rwemwana uyu rwucharamba rwuri mundangariro dzevabereki vake nevamwe vana vechikoro, kusanganisira vakamurova. Kunyangwe ivo vamwe vana vacho vanonzi vakamurova, vanoda kutobatsirwa kuti vasarambe vaine pfungwa yekuti vakaponda. Pedzai chikudo muzvikoro!